Sivame ukuzwa mayelana izakhiwo zezempilo, okuyinto has a pectin. Lokho kuyinto, it is hhayi laziwe kubo bonke. Okokuqala nje, ubunjalo ingcina efana (a polysaccharide) kwakheka okuyinto kusukela galacturonic acid. Sitholakala ukudla abaningi abadabuka isitshalo. Lokhu izithelo, imifino, izimpande ngisho ulwelwe.
Ngokuvamile, ukusetshenziswa kwalo ezitholakala izimboni ezifana nokudla kanye eyenza imithi umkhakha. Imboni esikhiqiza pectin kusuka pomace ezisele ngemuva ukucutshungulwa ezisawolintshi izithelo, ama-aphula, beet, nojikanelanga. Confectioneries esetshenziswa ngempumelelo emsebenzini wabo bonke izakhiwo ezuzisayo yalolu ketshezi. Kuyinto esisemqoka ekwakhekeni loshokoledi (ezenziwe kwalo ukugcwalisa), jellies, iziphuzo equkethe juice zemvelo, lwebhece, ngisho u-ice cream.
Ngakho, sathola umsuka pectin isetshenziswa nalapho. Kuyini, manje kuyacaca. Ungahambisa ku ekutadisheni impahla yayo ezuzisayo. Ngokusho kochwepheshe abaningi, pectin kusiza umzimba womuntu wakwazi ukuqeda ubuthi ehlukahlukene. Lapho efeza umsebenzi wayo obalulekile yokususa ubuthi, awusebenzi kusenze phi hlungu. Ingqikithi pectic has nomthelela omuhle microflora nokwenziwa ngcono esiswini motility, ukwehlisa cholesterol, futhi uzabalaza nemiphumela eqeda ukuvuvukala we isilonda esiswini.
Yiqiniso, cishe nesithakazelo esikhulu kulokho okufanekiselwa ukudla aqukethe pectin. Kuyini futhi yiziphi izinzuzo usuwazi. Imikhiqizo zibalwa kuqala kunombolo pectin, ubheke Citrus bohlobo. Lokhu lemon, futhi orange, futhi tangerine, noma kunalokho, soma yabo. Indawo yesibili anganikelwa emahlangothini izithelo owaziwa ezifana njengama-apula. Khona-ke kukhona izaqathe, amabhilikosi, cherry nokunye.
Nokho, lapha sifika isikhathi lapho kuphakama umbuzo: kanjani ukulungiselela pectin ekhaya? Njengoba kushiwo ngenhla, imikhiqizo eminingi aqukethe, kodwa ezivame kakhulu zezikebhe ezisetshenziswa self-catering, kuyinto apula. Kungani lesi sithelo? He is ezingabizi kakhulu phakathi kwabanye, futhi ilula okwanele ukucutshungulwa kanye nokulungiselela.
Indlela yokwenza apula pectin, Ufundani iresiphi elandelayo. Okokuqala udinga ukuthola lokho okudingeka sikwenze. Nasi uhlu izithako kanye nezitsha ezisetshenziselwa ukupheka:
- 1 kg apula;
- 125 ml wamanzi;
- epanini kokuba phansi obukhulu;
- ngesihlungo (hhayi metal).
Indlela sokulungiselela ulula. Hlanza apula uthathe 8 izingcezu, ne ikhasi kanye imbewu. Khona-ke isithelo olungiselelwe ibekwe ebhodweni bese uthele isilinganiso esifanele amanzi. Ingxube kwaphumela is abilayo ngesikhathi ukushisa cishe 25 imizuzu nge elishukumisayo njalo. apula Uma selehlile okuphekiwe kudingeka awathulule ku ngesihlungo. Juice, okuzokwenza agelezele esitsheni lelungiselelwe iqukethe semali pectin izinto.
Kodwa ukuze uthole powder pectin, kubalulekile ukuba shabalala ketshezi ngokweqile. Kuze kube yimanje esitsheni juice ibekwe eziko futhi eliwu shabalala amanzi. Umphumela wale izenzo nangentando pectin - powder amnyama-anemibala. Ukuvumelana kwayo kufana ushukela oluyimpuphu. Ukugcina umkhiqizo okuholela kumele sibe moya ingilazi izimbiza, endaweni epholile eyomile.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela ukuze uthole pectin. Kuyini, uyazi, futhi. Manje, lo mbuzo ungafaki ngawe ekupheleni efile, futhi ulwazi zinganikezwa nabangani.
Indlela ukupheka anyanisi in Batter?